Maitiro ekugonesa chaiyo-nguva nharembozha chiyero muyero muIOS 14 | IPhone nhau
Maitiro ekugonesa chaiyo-nguva nharembozha chiyero muyero muIOS 14
Isu tatoziva kuti kune Apple hutano chinhu chinofanirwa kuiswa mari zvakanyanya. Muchokwadi, zvese zvishandiso zvinoshanda neIOS uye iPadOS 14, pamusoro peWatchOS 7, inosanganisira mabasa nenzvimbo zvinobvumidza kusimudzira hutano hwevanhu. Mune vhezheni yekupedzisira, muIOS 13, Apple yaisanganisira headphone odhiyo yekuyera kuongorora, izvo zvakatibvumidza isu kuona avhareji emadhivhibheki atakange taburitsa zvirimo pamidziyo yedu. Nekudaro, muIOS 14 uye iPadOS 14 iro basa rinoenda kumberi uye rinobatanidza a rarama audio odhiyo chikamu kubva kuControl Center, kuziva munguva chaiyo ndeapi ma decibel ari kuburitswa mumahedhifoni edu.
Shandisa chaiyo-nguva kuyerwa kwezwi remahedhifoni ako muIOS 14
Inomiririra iwo odhiyo vhoriyamu yemahedhifoni ako akayerwa mumadhigibhi A (dBA). Iyo inogona kukubatsira iwe kuti unzwisise kuti yakareba sei iwe uchifumurwa kune yakakwira manzwi mazinga, chokwadi icho chinogona kukanganisa kunzwa kwako.
Vakuru vehutano pamwe nenzanga yesainzi vanobvumirana nazvo kudzokororwa ruzha pakukwirira kwakanyanya kunokanganisa nzvimbo yekunzwika, kuburitsa kukuvara kusingadzoreki. Ndosaka zvakakosha kuti tizive masimba api atiri kuzviisa pachena kuti titore matanho kana, kana isu tisingazive, enda kuna chiremba kunogadzirisa kusahadzika kwedu.
MuIOS 14 uye iPadOS 14 inosanganisirwa chaiyo-nguva kuyerwa kwenzwi rezwi reedu mahedhifoni. Apple inoona kuti mahedhifoni akanakisa maAirPods uye AirPods Pro, asi kune mamwe akawanda anotsigira basa iri. Kuti tiishandise tinongofanira kutevera matanho anotevera:
Enda kuZvirongwa uye inodzora nzvimbo
Wedzera iyo «Kunzwa» basa kune yako kudzora nzvimbo
Nzeve yekunzwa inozooneka ipapo munzvimbo yatakamisikidza basa. Sarudzo icharamba isingashande kusvikira tabatana mahedhifoni. Iyo nguva yatinotanga kutamba neanoenderana mahedhifoni, tinogona kudzokera kunzvimbo yekudzora kuti tione kuti kutaridzika kwebasa kuri kuchinja sei.
Kana isu tikadzvanya kwemasekondi mashoma pane iyo nzeve icon, iro basa rese rinoratidzwa. Isu tinoona chiyero chedecibel icho chinobva kubva makumi maviri kusvika zana negumi. Munguva chaiyo tinoona mafambiro anoita chikero kutenderera hunhu hwesimba matiri kuburitsa zvirimo pamahedhifoni. Rini isu tinodarika makumi masere nemuvara webasa rinoshanduka kuita yero uye tinonyeverwa kuti iko kwakanyanya kusimba uye kuti isu ngatingwarirei.
Pane imwe nhambo isu tichataura nezve rimwe basa ratingaite pasi peatakakurukura. Pasi pezita re «Teerera mhenyu». Iyo inobvumidza mushandisi kubereka izvo zvinonzwika kunze nenzira yakawedzeredzwa nekuda kwemaikorofoni eAirPods.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Maitiro ekugonesa chaiyo-nguva nharembozha chiyero muyero muIOS 14
Vazhinji Vashandisi Vanogunun'una yeHigh Battery Dhure Uchishandisa Apple Music pane iOS 13.5.1